Kedu ihe bụ usoro kachasị dị irè iji dozie atụmatụ uto B2B dị irè? | Martech Zone
Wednesday, June 13, 2018 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
Dị ka a nnyocha a na-adịbeghị anya site InsideView nke ndị isi ahịa na ndị na-ere ahịa, 53% nke ụlọ ọrụ anaghị enyocha mgbe niile ahịa ha, 25% nwere ngalaba azụmaahịa na azụmaahịa na-ekwenyeghi na ahịa ha.
B2B ụlọ ọrụ ndị na-eme nyocha nke ha Onu ahia zuru ezu (TAM) ma kwado mbọ ire ahịa ha na ọrịre ahịa ha bụ ugboro atọ karịa 3.3 gafere karịa ebumnuche ego ha na ụlọ ọrụ B2B na-eleba anya na Ezigbo Profaịlụ Ndị Ahịa (ICP) nwere oge 5.3 gafere karịa ebumnuche ego
Budata Ọnọdụ nke Ahịa na andzụ ahịa na 2018
Dabere na N'ime, site na ịza ajụjụ atọ a, ụlọ ọrụ smart B2B na-ewepụta nnata ego ha na-enweta:
Ole ndị bụ ndị ahịa m kacha mma?
Kedu ala ọhụrụ na ụlọ ọrụ ebe m nwere ike ịgbasa?
Ànyị na-eso ndị ahịa ziri ezi na ego kwesịrị ekwesị?
Nke a bụ isi ihe kpatara azụmaahịa dabere na akaụntụ ji gbawa ewu n'etiti ụlọ ọrụ B2B. Companieslọ ọrụ B2B na-enyocha mgbe niile ma na-elekwasị anya na ndị ahịa nwere ike ịchọta - mana nyiwe ndị a na-enyere ha aka ịme akara, akara, ahịa, na imechi mmemme ndị ahụ nke ọma.
InsideView Apex na-akpachapụ anya nyocha ahịa na-eji data oge na nyocha nyocha ka ụlọ ọrụ nwee ike ihu ahịa ọhụụ kpamkpam ma mee mkpebi ngwa ngwa ngwa ngwa.
Anyị ghọtara na anyị nwere teknụzụ, nka, na data iji nyere ụlọ ọrụ aka ịza ajụjụ ndị a ọsọ ọsọ na obi ike ka ha ghara ịhapụ ohere ọ bụla. Atụmatụ azụmaahịa ekwesịghị ịdabere na ịkọ nkọ na ịkọ nkọ. Ma ọ kwesịghị ịchọ nchịkọta data na-agwụ ike. InsideView Apex na-eji teknụzụ na-enweghị oke na data kachasị mma ka ị nwee ike ịme mkpebi ziri ezi maka azụmahịa gị. kwuru Umberto Milletti, onye isi oche nke InsideView
Ezubere ya kpọmkwem maka ndị isi B2B, InsideView Apex na-ekwu banyere usoro ịga ahịa ọ bụla site na atụmatụ atumatu na ịhazi mmezu na nyocha na njikarịcha.
plan: Chọpụta ahịa ọhụụ ma kwado atụmatụ ị ga-aga ahịa
Kọwaa ezigbo njirimara ndị ahịa (ICP) site na iji ọkachamara na-enweghị nghọta na data ndị ahịa dị n'ime.
Maapụ ndị ahịa dị ugbu a na data atụmanya megide data ahịa dị na mpụga iji ghọta ma tụọ ahịa ahịa adreesị (TAM).
Jiri anya nke uche hụ mpaghara ma ọ bụ ókèala ahịa ọhụụ ma ọ bụ nke dị nso ma mee nyocha “ọ bụrụ na” iji mezie ịtụle.
Kpebisie ike na ntinye nke ụlọ ọrụ TAM, akụkụ ezubere iche, ma ọ bụ ókèala, lee ohere oghere ọcha, yana ndepụta mbupu nke akaụntụ ọhụrụ na ndị mmadụ iji tinye na CRM ma ọ bụ mmemme akpaaka ahịa (MAP).
Jiri AI iji kpughee ihe ndekọ ndị ọzọ a tụrụ aro ka ha dakọtara na njirimara nke ezigbo ndị ahịa na / ma ọ bụ atụmanya.
Igbu: Tinye aka akọwapụtara iji mepụta atụmatụ GTM
Mee ahia ahia (ABM) nke edere iji lekwasị anya n'ahịa na ahia na ihe kacha mkpa.
Flag ABM, ICP, na kọwaa akụkụ ma ọ bụ ókèala akaụntụ na kọntaktị n'ime ahịa na ahịa ngwaọrụ ka mmezi ahịa na ahịa njikọ aka.
Duzie ndị ọrụ ire ahịa ka ha rụọ ọrụ akwadoro maka otu esi etinye aka na otu ABM / ICP / Segment / Territory otu iji mee ka nsonaazụ achọrọ.
Win: Jiri anya nke uche hụ arụmọrụ megide ngalaba echebere na oge iji wee nwee ihe ịga nke ọma
Nri MAP na CRM data n'ime InsideView Apex iji gosipụta ihe ịga nke ọma na ngalaba ebumnuche na ọkwa ọ bụla nke olulu ahụ na oge na-aga dị ka ndị na-eduga n'ịgbanwe ohere na mmeri azụmahịa.
Chọpụta ebe ndu ma ọ bụ ohere nwere ike ịrapara n’ezie n’oge.
Tụlee otu ị si eme na ngalaba echebere na ndu, ohere, yana azụmaahịa na mpụga ICP gị.
Tụọ ngalaba nke ọ bụla, ma ọ bụ na mkpokọta, iji anya nke uche hụ ebe ị na-enwe ọganiihu kachasị, yabụ ị nwere ike ilekwasị anya na akụ gị na ebumnuche ndị nwere ikike kachasị elu.
Tags: ngụkọta addressable ahịa